Amapancake ku-yogurt, zokupheka nezithombe ngezinyathelo. Ama-pancake ku-yogurt anomzimba omncane nemigodla, eningi, emvubelo, ngaphandle kwamaqanda
Indlu yasekhaya Ukupheka Ukubhaka Amaphikishi ama-pancake nama-pancake
Yeka ukuthi okumnandi kanjani ukupheka ama-pancake nge-yogurt, izindlela zokupheka ezinhle kakhulu ngesithombe
I-Prostokvasha ngumkhiqizo wobisi ovuthayo owenziwe nge-dietetic, onomthamo ophezulu wamandla, owenziwe ngomzimba ngokuphelele futhi unomphumela omuhle emaphethelweni emathunjini. Ama-pancake ku-yogurt anezinambitheka ezinomsoco ozwakalayo, awunakuzwa ubuhlungu obukhulu futhi obumnandi obupholile. Akunzima ukuwapheka, ikakhulukazi uma kukhona iresiphi enhle, ebonisiwe.
Ama-pancake amancane anezimbobo ngobisi obomvu, iresiphi enezithombe ezisekelwe ekuphenduleni
Ama-pancake ngobisi obunamakhaza, ephekwe ngendlela enzima kangaka, ayimfihlo futhi ayinkimbinkimbi. Ziqhakazile ngokoqobo emlonyeni futhi zihlangene ngokuhambisana nanoma yikuphi ukugcwaliswa, kokubili okunomsoco futhi okusawoti. Uma ufuna ukufaka i-batch inyama noma imifino enomsoco, ungayinquma noma ususe ngokuphelele ushukela kusuka ku-iresiphi. Inhlama kulokhu ngeke ibe yindlala futhi ngeke iphule ukunambitheka kwenyama noma amazambane okugcwalisa.
ufulawa - ½ kg
i-yogurt - izipuni ezimbili
amafutha yemifino - 3 tbsp
amaqanda - izingcezu ezimbili
usawoti -1/2 tsp
i-soda - ½ tsp
ushukela granulated - 3 tbsp
Amaqanda, i-kefir efudumele, ushukela nosawoti olusha emgodini ojulile. Umfula uhlunga ngesihlungo, engeza ushukela weqanda uhlanganise kahle kakhulu.
Enkomishini yamanzi abilayo, qeda isoda bese ufakwa inhlama. Gcoba kahle ukuze kungabikho izimpumputhe bese ushiya imizuzu engu-10-15 ukuphefumula. Bese uthele emafutheni we-sunflower.
Frying pan ne-grease encane ngenxenye yesinqumelo. Hamba ucezu inhlama, uthele phansi bese udosa i-pancake ohlangothini ngalunye ngemaminithi angu-1-2.
Etafuleni, hlala ushisa ngobisi, ikhofi, i-cocoa noma itiye elimnandi.
Indlela yokwenza ama-pancake nge-yogurt ngamanzi abilayo, iresiphi ngesithombe
Ama-pancake ayedla kancane emaphethelweni, inhlama udinga ukwengeza amanzi, kodwa hhayi amanzi ajwayelekile afudumeleyo, kodwa amanzi abilayo futhi ugqugquzela ngokucophelela zonke izithako.
i-yogurt - 1 st
ushukela - 2 tbsp
ufulawa - 7 tbsp
amanzi abilayo - 125 ml
usawoti - 1/3 tsp
i-soda - 1/2 tsp
amafutha yemifino - 50 ml
I-soda ihlakaze endaweni ehleliwe ekamelweni lokushisa bese ushiya imizuzu engu-10-15. Ubuningi kufanele bukhule futhi banda kancane ngevolumu.
Amaqanda ahlanganiswe noshukela, usawoti kanye ne-whisk endaweni epholile. Thela emafutheni e-sunflower bese ushaya futhi. Bese uthele ubisi obomvu bese uhlangana kahle.
Yengeza kancane kancane ufulawa. Hlanganisa zonke izithako ukuze kungabikho izimbungulu nama-clots. Inhlama ekulungele kufanele ibe nokuvumelana okunamandla, okunamandla.
Thela ngamanzi abilayo amanzi abilayo bese ugubungula kahle.
Frying pan, ungagcoli ngamafutha. Fake ama-pancake ohlangothini ngalunye kuze kube umbala omnandi wegolide bese ukhonza ushisa etafuleni.
Sipheka ama-pancake amnandi nge-yogurt, iresiphi ngesithombe
Ukupheka ama-pancake ahlanzekile, acebile futhi aphezulu, akwazi ukuncintisana nebhasikili, amaqanda kuzodingeka afakwe enhlama. Kodwa ayikho eyodwa noma emibili, kodwa iningi lezingcezu ezine. Yizo kuphela ezizosinika umoya we-dish futhi zenze ithenda futhi zicebile.
ufulawa - 300 g
i-yogurt - 250 ml
amaqanda - izingcezu ezine
amanzi abilisiwe - 150 ml
amafutha ezilwane - 20 g
Usawoti, ushukela kanye nofulawa kuhlangene esitsheni esijulile. Yethula amaqanda bese ushaya i-coronet. Ubuningi kufanele bufanane, bukhulu futhi busheleleke kakhulu.
Thela emanzini nase-kefir ekamelweni lokushisa bese uxuba kakhulu. Ekugcineni, engeza amafutha.
Ukumboza isitsha ngefilimu yokudla bese uyishiya etafuleni ekhishini ngamaminithi angu-30-40.
Sishisa i-pan yokuthosa ngokushisa okukhulu. Gcoba kakhulu ngamafutha ezilwane noma amaqebelengwane. Thela ingxenye yenhlama kuya phansi futhi uyibeke ngobumnene phezu kwendawo.
Hlanganisa ama-pancake ohlangothini ngalunye, uwafake enqwabeni, uthele isiraphu somuncu noma iberry bese ukhonza.
Ama-pancake aluhlaza nge-yogurt nemvubelo, iresiphi ngesithombe
Ama-pancakes asuka enhlabelweni yemvubelo abhekwa njenge-classic yohlu hlobo, kodwa-ke, isikhathi esiningi sidingeka ukulungiselela kwabo. Okokuqala kufanele wenze i-spit, ulinde ize ifike uphinde uqale ukupheka. Kodwa-ke, isidlo esilungile siphumula kakhulu, esiqeda ngokuphelele futhi siqede ngokuphelele yonke imizamo esetshenzisiwe.
i-yogurt - 400 ml
ufulawa - 400 g
imvubelo eluhlaza - 50 g
ushukela granulated - 4 tbsp
I-Butter - 50 g
usawoti - ½ tsp
Imvubelo yokuqothula ku-yogurt. Thela isipuni seshukela, ufulawa uphinde uhlanganise uze ubushelelezi. Vala isembozo ngokuqinile futhi uthumele esiqandisini ngamahora angu-10-12.
Emva kwesikhathi sesidlulile, engeza ushukela osele, usawoti namaqanda, ugxilise zonke izithako bese usuka etafuleni cishe ihora elilodwa.
Phakamisa inhlama ngobumnene bese uhlangana ngobuncane obisi olufudumele. Umshini oqediwe kufanele ube nesakhiwo esigeleza ngaphandle kwezimbane namagundane.
Faka ama-pancake epanini elibhakabhaka elibomvu elibomvu ngamasekhondi angu-50-70 ohlangothini ngalunye.
Indlela yokwenza ama-pancake nge-yogurt ngaphandle kwamaqanda, iresiphi ngesithombe
Ngisho ngaphandle kwamaqanda, ungabhaka ama-pancake amnandi futhi athambile nge-yogurt. Ukuze wenze lokhu, udinga ubuncane bemikhiqizo, futhi umoya wokuphefumula uzonikeza ibhotela lesifiso kanye ne-baking powder.
ibhotela - 100 g
ufulawa - 150 g
i-yogurt - ½ ilitha
i-powder baking - 1 tsp
Hlanganisa ibhotela ebhodini lokugeza amanzi bese ubanda ukushisa ekamelweni. Thepha kufulawa, usawoti, ukupheka powder bese uxube kahle.
Thela ubisi olunomfudumalo obuncane obuncane, ngenkathi ushukumisa inhlama.
Frying pan phezu ukushisa okukhulu, gcoba phansi nge margarine bese bhaka ama-panc for 1.5 imizuzu ngakunye.
Khonza etafuleni nge ukhilimu omuncu, ubisi oluncibilikile, ujamu noma uju.
Indlela yokwenza ngokushesha ama-pancake nge-yogurt: iresiphi yevidiyo
Le vidiyo isitshela ngokuningiliziwe ukuthi ungakwenza kanjani ngokushesha ama-pancake nge-yogurt. Imvubelo ayifakiwe ekubunjweni, futhi uviniga nejusi kalamula akusetshenziselwa ukucima isoda. Umqubu unomusa omuhle, othakazelisayo kanye nephunga elimnandi, elincane.
I-pancake yemifino ne-curry sauce
Ama-muffins ensimu ane isiraphubhisikidi
Amapancake nge ukugcwalisa sitrobheli
I-Creams ne-plum, i-ricotta nobusi
Ukwelashwa kwesibili kwabesifazane
Isisindo ngesikhathi sokulahlwa
Ungakhetha kanjani i-skis ngezinyawo?
Indodakazi ka-Anna Samokhina - Sasha Samokhin
Izimfihlo zesitayela sangempela sabesifazane
Inkampani: imithetho yokusinda
Ithebula lesikhwama se-lenten: imenyu elula kodwa yangempela
Isaladi "Konke okuseduze"
Amabhisikidi we-Chocolate nama-hazelnuts
Ukubonakaliswa kokushisa okubandayo
Indlela yokuziphatha uma ukhethwe njengomqondisi wenkampani
Ukunakekelwa Kwesikhumba Nesikhumba
Ukuqhakaza okwesibhakabhaka: izindlela zokupheka eziwusizo eziwusizo
Imvelo yomuntu ngewashi lezinto eziphilayo
Ama-sulfur coorks ezindlebeni zezingane
Ungakwazi kanjani ukunciphisa umzimba ngokushesha futhi ngokushesha ngokusiza kokudla?
Yini okufanele ugqoke izicathulo nge-spikes?